उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो : के गर्न पाईन्छ, के पाईन्न ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो : के गर्न पाईन्छ, के पाईन्न ?
२४ भाद्र, २०७७ १९:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सरकारले तीन सातापछि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संयुक्त रूपमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो पर्ने निर्णय गरेका हुन्। मंगलबार र बुधबार सुरक्षा अधिकारी र गृहमन्त्रालयसँगको परामर्श पछी तीनै सीडीओ कार्यालयले नयाँ आदेश जारी गरेका हुन्।
सरकारले कोरोनाका नाममा लगातार निषेधाज्ञा गरेको भन्दै यसको विकल्प खोज्न जनस्वास्थ्यविद् र सामाजिक अगुवाले अनुरोध गर्दै आएका थिए। परिस्थतिको मूल्यांकन गर्दै नयाँ आदेश जारी भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ आदेश अनुसार बिहीबारदेखि सवारी साधन जोर–बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग र खलकारखाना खोल्न पाइने छ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि भेला हुन, जुलुस गर्न, भीडभाड र जात्रा तथा महोत्सवमा सहभागी हुन, मन्दिर र चर्चमा नित्य पूजाबाहेक गतिवविधि गर्न, कलकारखाना र व्यवसायमा भीडभाड हुने काम गर्न, शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न, गोष्ठी गर्न, सिनेमा घर खुला गर्न, शैलुन, ब्यूटी पार्लर स्पा सञ्चालन गर्न, पुस्तकालय, चिडियाखाना खोल्न र स्वास्थ्य मापदण्ड विपरित श्रमिक र कामदार ओसारपसार गर्न पाइने छैन।
देशभर झन्डै चार महिना लामो लकडाउन गरेको सरकारले भदौको पहिलो सातादेखि निषेधाज्ञा गरेको हो।
निषेधाज्ञापछि पनि उपत्यकामा संक्रमण भने घटेको छैन। अहिले काठमाडौंमा दैनिक चार सयको हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन्। देशभर कुल संक्रमितको संख्या ४९ हजार नाघिसकेको छ। अहिले उपत्यकासहित मुलुकका चालिसभन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ।